Ngwa 8 kachasị mma iji mụta ịgba egwu hiphop | Gam akporosis
Ignacio Sala | 12/07/2021 10:00 | Ngwa gam akporo
YouTube aghọwo otu n'ime usoro mmụta kachasị mma ịmụta ime ụdị ihe ọ bụla, site na ịrụkwa obere ihe, iwu ụlọ n'ụdị ọ bụla, ịghọ ọkụ eletrik, plọmba ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ.
Ma, n'ụzọ ezi uche dị na ya, a rụghị ụlọ n’elu ụlọ na anyị ga-echebara usoro nke usoro iji mezuo nzube anyị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmụta ịgba egwu hiphop, ihe mbụ ị ga - eme bụ ileba anya na Playlọ Ahịa Play.
Na Storelọ Ahịa Play anyị nwere ike ịchọta ngwa dị iche iche na-enye anyị ohere ịmụta isi usoro na usoro inye anyị pines mbụ na agba egwu a nke na-ewu ewu na-adịbeghị anya, afọ 40 mgbe ọ ghọchara ihe ịga nke ọma.
1 Mgbatị ahụ hip hop
2 Ntuziaka Ntuziaka Hip Hop
3 Hip Hop Dance Nzọụkwụ Videos
4 Olee otú breakdancing
5 STEEZY - Mụta otu esi agba egwu
7 Egwuregwu 2 iji mụta Hip Hop
Mgbatị ahụ hip hop
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmalite iwere nzọụkwụ mbụ anyị n’ụwa nke Hip Hop, anyị ga-eleba anya na ngwa ọzụzụ Hip Hop, ngwa dị maka n'efu na Playlọ Ahịa Play nke gunyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Hip Hop ọzụzụ na-etinye anyị n'aka nke a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mmegharị na ihe kariri udiri 60, site na nke kachasị na nke dị elu. Omume niile ị ga-eme dị na edemede 3: Lokpọchi, Popping na Breaking.
Ngwa a na-enye anyị a ọzụzụ ọzụzụ iji mụta Hip iwuli elu na 8 izu, na-edekọ ọzụzụ niile anyị na-eme kwa ụbọchị. Ya mere, na anyị bụ mgbe niile, ngwa na-akpọ anyị ka anyị rụọ ọrụ notma Ọkwa iji na-echetara anyị kwa ụbọchị na anyị na-echere ọrụ anyị na-amụta nke a agba egwú.
Mgbatị ahụ - ịgba egwu iji gbaa abụba ọkụ
Developer: Ihe egwu Hazard
Ntuziaka Ntuziaka Hip Hop
Dị ka aha ya na-egosi, Hip Hop Dance Guide bụ nduzi nke anyị nwere ike ịmalite inye anyị nzọụkwụ mbụ na ụwa nke Hip Hop. Otu ihe dị ike nke ngwa ahụ bụ na ọ na-ahapụ nkọwa ya wee gosi anyị vidiyo nke mmegharị dị iche iche eji eme egwu a.
Vidiyo, ha adịghị n'ime ngwa ahụ, yabụ anyị chọrọ njikọ intaneti. Vidio ndị a dị na YouTube, yabụ kama iji ngwa ahụ, anyị nwere ike ịchọta ọwa ebe ha nọrọ wee nwee ọ themụ na kọmputa anyị ma ọ bụ na TV.
Ọzọ nke ike nke ngwa a bụ enweghị ụdị mgbasa ozi ọ bụla. Onweghi ihe jikota onu ahia n’ime ulo, nke na apughi ibudata.
Hip Hop Dance Nzọụkwụ Videos
A na-achọta ngwa ọzọ na-atọ ụtọ ịtụle ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmụ Hip Hop na Hip Hop Dance Steps Videos, ngwa nke gụnyere a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke vidiyo YouTube, ya mere, dị ka ngwa gara aga, njikọ ịntanetị dị mkpa ee ma ọ bụ ee.
A na-ekewa ọdịnaya niile dị na edemede dị iche iche, yabụ ọ dị mfe ịchọta usoro ma ọ bụ ọkwa anyị na-achọ. Hip Hop Dance Nzọụkwụ Video dị maka nbudata kpamkpam n'efu, gụnyere mgbasa ozi mana enweghị ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Developer: Studio Arcane App
Olee otú breakdancing
Otu esi agba egwu na-enye anyị ohere Choreographies nke nkuzi ihe zuru oke nke mere na ị ga-amalite iji ụzọ mbụ were ụdị ma ị ga - enwe ike ịga nke nta nke nta ma jiri oke ndidi na nnọgidesi ike.
Ejiri ngwa a kuzi ihe nile gbasara nka nke agba egwu a site na nkuzi di mfe. Mana na mgbakwunye, ọ ga-azakwa ọtụtụ ajụjụ ndị mmadụ chọrọ ịmụ ụdị agba egwu a na-ajụ onwe ha, dịka a ga-esi n'ụlọ mụta ya, ọ bụrụ na ọ na-esiri m ike ịkpa ọhụụ, otu esi eme ntụgharị, kedu bụ azụ ma ọ bụ nwa agbọghọ E ...
Ọ bụrụ na anyị sonyere na otu ndị gbawara agbawa, anyị nwere ike ịme ndị enyi ọhụụ anyị na ha nwere ike ịmekọkọ ọnụ, nke doro anya na-eme ka ịmụtakwu ihe dị mfe. Etu ị ga - esi nweta ego maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi mana enweghị ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
STEEZY - Mụta otu esi agba egwu
STEEZY bụ ụlọ ịgba egwu zuru ezu n'ihi na gị gam akporo ngwaọrụ ma ọ bụ Smart TV na ọ ga-enyere anyị aka ịmụta agba egwu nzọụkwụ site nzọụkwụ, na n'afọ iri na ụma na kasị mma suut anyị. A na-agbakwunye ihe karịrị 800 klas na ndị ọzọ kwa izu, a na-enwekarị ụdị ejiji na usoro ntụrụndụ iji chọpụta.
Ndị klas ahụ sitere na ndị mbido ruo ndị ọkachamara, yabụ na ọ bụghị naanị maka ịmụ Hip Hop, mana anyị nwekwara ike iji ya mụta usoro ọhụrụ, melite usoro anyịOffọdụ ụdị egwu egwu anyị nwere ike ịchọta site na ngwa a bụ Hip-hop, Open Style, K-pop, House, Breaking, Popping, Whacking, Krump, Heels, Jazz Funk n'etiti ndị ọzọ.
Ndị nkuzi STEEZY ha bu ndi agba egwu ndị na-esonye kwa afọ n'ọtụtụ asọmpi gburugburu ụwa, na-agagharị, na-edekọ vidiyo vidiyo ... Ọ bụrụ na anyị echebara ihe niile anyị hụrụ n'azụ ngwa a echiche, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ngwa ahụ chọrọ ndenye aha kwa ọnwa.
Ọnụ ego nke ndenye aha kwa ọnwa bụ $ 20, ma ọ bụrụ na anyị họrọ ndenye aha kwa afọ (ozugbo anyị nyochachara otu ngwa ahụ si arụ ọrụ), anyị ga-echekwa dollar 40. Ngwa dị maka nbudata n'efu.
Ozugbo anyị nwere isi, oge eruola ka anyị lelee vidiyo dị iche iche anyị nwere na ntanetị YouTube. Na YouTube, anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke vidiyo ga-enyere anyị aka ịmezu usoro na / ma ọ bụ usoro ahụ anyị na-amụta iji ojiji nke ngwa dị iche iche dị na Playlọ Ahịa Play.
Ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ ịchọ vidiyo ebe ha na-akụziri anyị usoro ndị bụ isi na Kpọnye vidiyo ahụ na nwayọ nwayọ. Iji mee nke a, anyị ga-pịa wiilị gia dị na ala aka nri nke vidiyo ahụ, pịa ọsọ ma họrọ uru na-adịghị mma.
Na ngwa ngwa ngagharị, uche anyị nwee ike nyochaa ma buo usoro a n’isi na, na omume, mee ka ha ngwa ngwa. Dị ka agba egwu ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, ọ bụrụ na ịnaghị eme kwa ụbọchị, ngwa ndị ahụ enweghị ike ịrụ ọrụ ebube (anyị anọghị na Matrix n'oge a).
Egwuregwu 2 iji mụta Hip Hop
Ọ bụ ezie na ha abụghị ngwa kwesịrị ekwesị iji mụta otu esi agba egwu hip hop, ị nwere ike ile anya egwuregwu Hip Hop na egwuregwu Hip Hop, ha abụọ sitere na otu onye nrụpụta. Na Hip Hop School anyị nwere ike na-amụta na ike anyị na-eme ka ihe odide ahụ megharịa, ugboro ugboro, mmegharị anyị chọrọ iburu n’isi.
Na Agha nke Hip Hop, anyị ga-ahụ interface yiri nke ahụ ebe anyị nwekwara ike ịmụta mmeghari site na odide. Egwuregwu abụọ dị maka nbudata kpamkpam n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime egwuregwu.
Hip hop agha: ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke asọmpi
School Hip Hop - Egwuregwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 8 kachasị mma iji mụta ịgba egwu hiphop
Top 5 Flashlight ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo